UJason Sudeikis Uphumelele imbasa ye-SAG yeNtsebenzo eGqwesileyo nguTed Lasso | Ndisuka mac
UJason Sudeikis Uphumelele imbasa ye-SAG yeNtsebenzo eGqwesileyo nguTed Lasso
Njenge Kwacwangcisa, phezolo kumsitho wamabhaso we Ushicilelo lwama-27 lweeMbasa zaBadlali beTV, Umnyhadala owawubanjelwe eLos Angeles nalapho uJason Sudeikis waphumelela imbasa ye-SAG yokuSebenza ngokuBalaseleyo kuThotho lweeKomidi ngendima yakhe kuthotho lweTed Lasso.
KuSudeikis, eli lonyulo lokuqala kunye nebhaso lokuqala alifumanayo kolu khuphiswano, othe ukongeza ekubeni yinxalenye yabalingisi, ukwangumvelisi olawulayo wolu ngcelele. Eli bhaso likongezelelene kolo wayekhe walifumana ngaphambili kwaye lenza uTed Lasso a Uthotho lweApple TV + luyeyona mpumelelo
Eli bhaso liza kwiiveki ezimbalwa emva kokuphumelela ezintathu Abagxeki amabhaso Elona Gcisa libalaseleyo kuSudeikis, Olona luhlu luBalaseleyo lwamaTed Lasso kunye noMlingisi oNgcono weNkxaso kuHannah Waddingham. Ukongeza, i Umbutho wababhali waseMelika, Ndikwavuze kolu ngcelele nezinye iimbasa ezintathu ekufuneka songeze kuyo IGlobal Globe yeActor Best Comedy.
UJason Sudeikis udlala umqeqeshi webhola ekhatywayo waseKansas osayinwe liqela lePremier League njengomqeqeshi webhola oqeqeshiweyo, nangona kunjalo abanamava odlulileyo njengomqeqeshi kwaye kuncinci kwiiligi ezinkulu.
Okwangoku, uTed Lasso izakuba nexesha lesibini nelesithathu. Ixesha lesibini waqala ukurekhoda kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ngelixa lesithathu, ethi izakuba yeyokugqibela (okwangoku) ayaziwa ukuba ushicilelo lucwangciselwe ukuqala nini.
Ezona ndaba zamva nje zinxulumene neli xesha lesibini, siyifumana kubalingisi boluhlu, apho lityikityiwe khona USara Miles, Ngubani oza kudlala Isayikholojisti yezemidlalo ngenjongo yokunceda iqela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » UJason Sudeikis Uphumelele imbasa ye-SAG yeNtsebenzo eGqwesileyo nguTed Lasso
Ivenkile ye-elektroniki inikezela kwiikhowudi zasimahla zeenyanga ezine kwiApple Music
Ngoku iyafumaneka, kwi-beta, iAdobe Illustrator yeApple Silicon